Jijiga: War Xanuun Badan – Rasaasa News
Jan 5, 2014 atoobiya, Ogaden, Somali
Wararka ka imanaya Puntland waxay sheegeen in 15 dhalinyaro ah oo u dhalatay degaanka Somalida Atoobiya (Ogadenia) oo muddo ku xidhanayd Boosaaso, haatan iyaga oo maxaabiis ah lagu wareejiyey ciidanka Liyuu Police.
Dhalinyaradan oo uu saameeyey tarxiilka ka socda Sacuudiga, ayaa sheegtay in ay yihiin Soomaalida Atoobiyaan. Safiirka Atoobiya u jooga Sacuudiga ayaase diiday, ka dib kolkii laga waayey waraaqo aqoonsi, kuna hadli waayeen afka xabashiga.
Booliska Sacuudiga waxay ugu yeedheen wakiilka Soomaaliya u jooga Sacuudiga, kolkii ay u sheegeen in ay ka yimaadeen gabalka Ogaden. Wakiilka Soomaaliya ayaa siiyey waraaqo cadaymo ah, wuxuuna waydiiyey halka ay jecel yihiin in la geeyo Puntland bayna doorteen.
Kolkii ay Puntland yimaadeen dhalinyaradu waa la ciqaabay, maraanmar dheer ka dibna jeel baa la geeyey waxaana loogu yeedhay ciidanka Liyuu Police-ka.
Ciidanka Liyuu Police-ka oo haatana gacanta ku haya dhalinyarada, ayaan laga filayn in ay si wanaagsan ula dhaqmaan ama ay qiimeeyaanba xaalada la soo gudboonaatay dhalinyarta. “xanuun badanaa.”
Xili Ethiopia ay Diyaarado kaga soo daadguraysay 100,000 oo Ethiopian ah, kuwaas oo sharci daro ku joogay dalka Sacuudi Carabiya.
Arinta wiilasha ku dhacday waa arin xaqiiq ah oo maalin walba ka dhacda dalalka dibadaha iyo gudahaba.
2002, waxaan dalka Sweden ka codsaday qaxootinimo waana la,iidiiday, aniga oo xiligaa sheegtay in aan ka imid gabalka Somalida Atoobiya. Waxaa la ii sheegay in aan dalka ka baxo, ma haysan passport. waxaan tagay safaarada Atoobiya ee stockholm, xabashi jajaban baan ku hadlayey. Waxaan Safiirka ka codsaday in uu dalkii dib iigu celiyo ( i siiyo waraaq aan ku dhoofi karo). Safiirku wuxuu i waydiiyey in aan haysto aqoonsi Atoobiyaan ah, ma haysto baan idhi. Si sahal ah ayuu ii waydiiyey ma Somali baad tahay markaasaan idhi, haa Somalida Atoobiya. Safiirku wuu diiday in uu wax kaalmo ah i siiyo. Kolkaas ayaan ku idhi kalmad aan kolkaas ku ciil baxay “hadaan safiir Soomaali ah u tagi lahaa wuu i caawin lahaa aqoonsi la,aan.”
“Garo wayna i garan wayna i gaadi” Cigaal Shidaad.
Kolka laga yimaado dhibaatada ay ku hayso Atoobiya dadka Soomaalida ah ee gudaha jooga. Waxay dhibaatadu saamaysay dadka hadlan kara ee Qurbaha jooga, khaasatana kuwa aaminsan in ay Atoobiyaan yihiin.
Dhawaan waxay safaaradaha Atoobiya joojiyeen warqadihii aqoonsiga asal Atoobiyaanimada [Ethiopian origin identity], kuwaas oo ay dadka soo cadayn jirtay dawlada degaanka Soomaalida. Haday Atoobiya aamini wayday kana cararayso dadkii ay samaysatay, ha ogaato in aan waraabe iyo adhi xero la wada galin karin.
Somalia: A Large Number of Ethiopian Troops Arrive in Baidoa Town